HomeHoryaalladaKhabiirkii Ku Soo Daray Barcelona Xidigaha Messi Iyo Iniesta Oo Geeriyooday
Gudoomiyihii hore ee Akaadamiga carruurta lagu barbaariyo kubada cagta ee La Masia, Joan Lacueva oo u sabab ahaa in xiddigaha Barcelona ee Messi iyo Iniesta ku soo biiraan kooxda Barcelona, ayaa Geeriyooday isagoo da’diisu marayso 64 jira, kadib xanuun uu in badan u jiifay.
Sanadkii 2001 ayay ahayd markii, Joan Lacueva oo la dhacsan qaab ciyaareedka wiil da’yar oo ku jira Akaadamigu uu kula talliyey Barcelona inay heshiis la saxeexdan, taas oo ay ka aqbaleen, aakhirkiina anfacday.
Wiilkaas yar oo ahaa, mucjisada wakhti xaadirkan ee kubada cagta Leonel Messi oo aabihii doonayay inuu kooxaha kale ee Yurub ka bilaabo ciyaaraha , ayuu ka hor istaagay Lacueva oo markaas aad u danaynayay in xirfada yarkaas ku jirta anfaci doonto naadiga Catalanka.
Joan Lacueva oo ka sheekaynaya arimahaas, ka hor intii aanu geeriyoon ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa : “Waxaan u sheegay Maamulaha guud Parera in naadigu heshiis la saxeexdo Messi, markii u horeysay een u soo bandhigay, wuxuu ku calaamadsaday buugiisa xusuusaha uu ku kaydsado.”
Lacueva , wuxuu sheegay tilmaamay in ninka uu xiligaas u doodayay , aanay is arag ilaa mudadaas, ayna suurto gal tahay inaanu Messi aqoonsanin haddii ay iska soo hor bixi lahaayeen imika.
“Arinta kale ee layaabka lihi waxaya in haddii Messi imika iga soo hor baxo, aanu i garan lahayn”.
Dedaalka Joan Lacueva waxa kale oo kooxda ku yimid, daadihiyaha khadka dhexe udub dhexaadka u ah ee Andrea Iniesta.
Munich v Porto: Sidee ayay line-up-ka u xulan doonaan
Somalia: Horseed Oo 2-1 Ku Karbaashtay Heegan, Kuna Guuleysatay Koobka Gen. Daa’uud
Bartomeu: “Barcelona Ma Iibsanayso Pogba Sannadkan”